Robert Lewandowski Oo Maanta Jabin Jara Rikoor Uu Horay U Dhigay Tababarihiisa Haatan Ee Jupp Heynckes – Kooxda.com
Home 2018 February Jarmalka, Wararka Maanta Robert Lewandowski Oo Maanta Jabin Jara Rikoor Uu Horay U Dhigay Tababarihiisa Haatan Ee Jupp Heynckes
Robert Lewandowski Oo Maanta Jabin Jara Rikoor Uu Horay U Dhigay Tababarihiisa Haatan Ee Jupp Heynckes
Weeraryahanka kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa indhaha ku haya rikoorka uu dhigay tababaraha Bayern Munich Jupp Heynckes kulanka Schalke maanta.
Hadii uu weeraryahanka reer Poland dhaliyo goolkiisii 18-aad ee Bundesliga ee xilli ciyaareedkan waxa uu bar-barayn doonaa rikoor uu dhigay Jupp Heynckes wakhtigii 192/1973 markaas oo uu Jupp Heynckes dhaliyay 11 kulan oo xiriir ah oo horyaalka ah isaga oo u ciyaarayay kooxda Borussia Monchengladbach.
Lewandowski oo la hadlaya ayaa yiri’Waxaan u maleynayaa in tababaruhu wadnaha farta ku hayo, hadii aan gool dhaliyo labadayduba waxa aan ku jiri doonaa xaalad fiican”.
“Wuxuu ahaa gooldhaliye fiican, waana tababare fiican. Mar walba wuxuu isku dayaa inuu i caawiyo, mar walba waxa aan ka helaa talo fiican”.
Lewandowski ayaa haatan durba u muuqda mid ku guulaysan doona gool dhalinta horyaalka kadib markii uu xiddiga Pierre-Emerick Aubameyang oo kula tartamayay ka tagay Dortmund kuna biiray kooxda Arsenal.
Bayern Munic ayaa sidoo kale hogaanka ku haysa 18 dhibcood iyada oo laga yaabo in loo magacaabo ku guulaysatayaasha horyaalka iyada oo ay kulamo ka harsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan.